ဆီလီကွန်အရုပ်မကို ခြေထောက်ပြတ်ထွက်သည်အထိ ကာမဆက်ဆံခဲ့တဲ့ အမျိုးသား – Cele Channel
ဆီလီကွန်အရုပ်မကို ခြေထောက်ပြတ်ထွက်သည်အထိ ကာမဆက်ဆံခဲ့တဲ့ အမျိုးသား
Posted on January 21, 2018 Author Cele	Comment(0)
ပါတီပွဲအုပ်စုလိုက်ဓာတ်ပုံရဲ့ နောက်ကွယ်က ကျောချမ်းစရာဖြစ်ရပ်
Posted on January 22, 2018 Author Cele
မိန်းကလေးသီးသန့်ပါတီပွဲတစ်ပွဲက အုပ်စုလိုက်ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံဟာ အချိန်အနည်းငယ်သာ ခြားပြီး ရိုက်ခဲ့ပေမယ့် တစ်ပုံက နောက်တစ်ပုံထက် အများကြီးကျောချမ်းစရာကောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ အမည်မသိမိန်းကလေးတစ်စုဟာ စကော့တလန်နိုင်ငံရဲ့ တောတွင်းတစ်နေရာမှာ လက်ထပ်ခါနီးသူငယ်ချင်းတစ်ဦးအတွက် နှုတ်ဆက်ပါတီပွဲကျင်းပခဲ့ကြပေမယ့် သူတို့အနားမှာ အလိုမရှိစရာ ဧည့်သည်တစ်ဦးပါ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ပထမဓာတ်ပုံမှာတော့ သူငယ်ချင်း (၁၀)ဦးဟာ တောင်တန်းတွေကို နောက်ခံထားပြီး ရိုးရိုးပုံရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယပုံမှာတော့ (၁၁)ဦးဖြစ်လာခဲ့ပြီး ဆံပင်အနက်ရောင်နဲ့ ကောင်လေးတစ်ဦးဟာ သစ်တုံးနောက်ကနေ ချောက်ချားစရာ ချောင်းကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ ၄င်းဓာတ်ပုံကို ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တင်ခဲ့ချိန်မှာတော့ လူတိုင်းကြက်သီးထခဲ့ကြရပါတယ်။စကော့တလန်ကျေးလက်ဒေသရှိ ခြံဝင်းတစ်ခုမှာ ရိုက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံဖြစ်ပြီး အနီးအနားမှာ ကလေးရော လူကြီးရော တစ်ယောက်မှာ မရှိခဲ့ကြတဲ့နေရာပါ။ ဓာတ်ပုံထဲမှာ ပါလာခဲ့တဲ့ကောင်လေးဟာ အနောက်ဘက်က ရေကန်ထဲမှာ ရေနစ်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း သိခဲ့ရပြီး ဝိညာဉ်ဟာ ၄င်းအနီးတဝိုက်မှာ စွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုဖြစ်ရပ်ဟာ (၁၉၉၄)ခုနှစ်တုန်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ the legend of The Blue Boy ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဖြစ်ရပ်ဆင်တူနေပါတော့တယ်။ ၄င်းဇာတ်လမ်းထဲမှာ ကောင်လေးတစ်ယောက်က အိပ်နေတုန်း ယောင်ပြီး လမ်းထလျှောက်ကာ ရေထဲဆင်းသွားပြီး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ […]
ဟဲဟိုးလေယာဉ်ကွင်းမှာ ကမ္ဘာလှည့်နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးရဲ့ မထင်မှတ်တဲ့ လုပ်ရပ်
Posted on December 30, 2017 Author Cele
ဟဲဟိုးလေယာဉ်ကွင်းမှာ ကမ္ဘာလှည့်နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦး romatic ဆန်ဆန်ချစ်ပြသွားတာ သက်ဆိုင်သူရေ…. ချစ်သူလာမယ့်လမ်းကို ကျောခင်းလို့ပေးပြီး ပေးဆပ်ရဲတဲ့ သတ္တိကို ပြသွားခဲ့တာပါ ။ အတုခိုးမမှားကြနဲ့နော် . . . photo>>>Ko Ba Kaung – Kyaw Soe Naing ဟဲဟိုးလယောဉျကှငျးမှာ ကမ်ဘာလှညျ့နိုငျငံခွားသားတဈဦး romatic ဆနျဆနျခဈြပွသှားတာ သကျဆိုငျသူရေ…. ခဈြသူလာမယျ့လမျးကို ကြောခငျးလို့ပေးပွီး ပေးဆပျရဲတဲ့ သတ်တိကို ပွသှားခဲ့တာပါ ။ အတုခိုးမမှားကွနဲ့နျော . . . photo>>>Ko Ba Kaung – Kyaw Soe Naing
အန္တရာယ်များသလို၊ လှပလွန်းခဲ့တဲ့ Pre-wedding ဓာတ်ပုံ
Posted on October 21, 2017 Author Cele
ထိပ်တန်းဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်နဲ့ ကိုယ့်မင်္ဂလာပွဲအကြို ဓာတ်ပုံတွေရိုက်မယ်ဆိုရင် ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းတွေ အံ့သြဘနန်းထွက်လာမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ယခုလိုမျိုး အန္တရာယ်များပြီး ထင်မှတ်မထားတဲ့ ဓာတ်ပုံမျိုးရရှိလိမ့်မယ်လို့ သတို့သားနဲ့ သတို့သမီးက မျှော်လင့်ထားမှာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်းကို Rachfeed ကနေ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ Pre-wedding ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုတွေထဲမှာ ထင်ရှားတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ CM Leung ဟာ အိုက်စလန်မှာ မင်္ဂလာဓာတ်ပုံရိုက်ကူးပေးခဲ့ပြီး အောက်မှာတွေ့ရမယ့်ပုံကတော့ သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးရိုက်ချက်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ ရဟတ်ယာဉ်ပျံသန်းနေတဲ့အချိန်မှာ သတို့သမီးက တည်ငြိမ်လှပတဲ့ ကိုယ်ဟန်အနေအထားနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ခံနေတာပါ။ ရဟတ်ယာဉ်က Photoshop effect မသုံးထားဘဲ တကယ်အစစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာ အချိန်ကိုက်တိကျပြီး ပုံကောင်းထွက်လာအောင်ရိုက်နိုင်ဖို့က အတော်အရေးကြီးပါတယ်။ EliteReaders ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ အိုက်စလန်က ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့တွေက ကယ်ဆယ်ရေး mission တစ်ခုအတွက် ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ ထွက်ခွာလာချိန်မှာ Pre weeding ဓာတ်ပုံရိုက်ကွင်းပေါ်က ဖြတ်ပျံခဲ့ပြီး အခုလို […]
တစ်နာရီမိုင်(၉၀)မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်နေချိန်အတွင်း မြေပြင်ပေါ်သို့ မရရအောင်ဆင်းခဲ့တဲ့လေယာဉ်များ